Voamarika: boaty mailaka tena ilaina amin'ny mailaka | Vaovao IPhone
Ny iOS 6 dia manolotra fiasa marobe amintsika izay tsy dia hita loatra fa afaka manampy antsika betsaka isan'andro. Iray amin'izany ny fahaizana manamarika mailaka sasany amin'ny sainam-pirenena, mba hahafahantsika miditra haingana kokoa amin'izy ireo, satria ao anaty boaty mailaka antsoina hoe "Marked" izy ireo. Tena ilaina, ohatra, rehefa te hamaky mailaka any aoriana isika, na te hanana azy eo am-pelatanana hampiasa azy io amin'ny fotoana fohy nefa tsy mila mitady azy amin'ny alàlan'ny boaty mailaka rehetra amin'ny kaontintsika.
Raha vantany vao any amin'ny mailaka isika, mijery ny mailaka tadiavinay hanisy marika, tsy maintsy tsindrio ny bokotra «Edit» eo an-tampony.
Ho hitantsika fa misy boribory poakaty miseho etsy ankavia, mifidy ny mailaka (na mailaka) izay tianay homarinana izahay ary mankeny amin'ny boaty mailaka "marihina", ary izao dia mijery ny ambany izahay ary tsindrio ny "Mark". avy eo mifantina ny safidy "Mariho amin'ny tondro".
Ho hitantsika fa homarihina amin'ny sainam-pirenena ny hafatray, ka ho mora kokoa ny hamantatra azy ao anaty boaty, fa aseho amin'ny sary izay lohany amin'ilay lahatsoratra, hisy boaty mailaka vaovao eo amin'ny efijery Mail lehibe antsoina hoe «Marihina» izay hilaozana ireo mailaka rehetra nomarihinay toy izao, hahafahantsika manana azy ireo rehefa ilaintsika izy ireo. Raha vao mamafa ny mailaka avy amin'ny toerana nisy azy ianao dia hanjavona koa ao amin'ny mailaka «Voamarika», ary koa, rehefa foana ny boaty mailaka dia hanjavona izy mandra-pahazoany hafatra indray.
Tsarovy fa ao amin'ny Actualidad iPad dia mamoaka andian-dahatsoratra izahay Lahatsoratra manazava ireo endrika tsy dia malaza loatra amin'ny iOS 6, toa ny ny tsy fitoviana eo amin'ny iCloud sy ny AppleIDna ny fiasa "Aza manelingelina". Zahao izy ireo ao amin'ny ny fizarana fampianarana anay.
Fanazavana fanampiny - iCloud sy AppleID amin'ny iPad, Ilay fampiasa "Aza manahirana" ao amin'ny iOS 6, Fampianarana ao amin'ny iPad marina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 6 » Voamarika: boaty mailaka tena ilaina ho an'ny mailaka anay.
Tena ilaina indrindra izany rehefa mahatsikaritra ny sainam-pirenena samihafa ampiasako amin'ny Mac ianao hanavahana sy hanamarihana ny mailaka ataon'ny tena manokana, sns. Tratry ny taona 2013
Moleskine Journal, avadiho ho kahie nomerika ny fitaovana iOS anao
Waze, mpitety GPS maimaim-poana hodinihina